ပထမဆုံးဦးအနေနဲ့ ????? ???????? ???? လေးတစ်ခု ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အိချောပို - Cele Gabar
ပထမဆုံးဦးအနေနဲ့ ????? ???????? ???? လေးတစ်ခု ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အိချောပို
“အနုပညာပျိုးခင်း” ရဲ့စင်တင်မင်းသမီးလေးဖြစ်တဲ့ အိချောပိုကတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးဖြစ်တဲ့အပြင် သူမရဲ့ အမိုက်စား ဘော်ဒီကောက်ကြောင်းတွေ ကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာအတော်လေး ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ စွဲမက်ဖွယ်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတွေနဲ့ လှပပြေပြစ်တဲ့ ရုပ်ရည်လေးတွေကြောင့် ပုရိသတွေကြား အလှသတင်းကြီးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
စူစူလို့ ပရိသတ်တွေချစ်စနိုးခေါ်ရတဲ့ အိချောပိုကတော့ သူမရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် အမြဲလိုလို မျှဝေပေးနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ သူမရဲ့ ပထမဆုံး ????? ???????? ???? လေးကိုရိုက်ကူးပြီး ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်လေးတွေကို Ei Chaw Po- စူစူ ဆိုတဲ့ Page နဲ့ သူမရဲ့ YouTube Channel တွေမှာတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ပရိသတ်တွေကို အသိပေးခဲ့ပါတယ် ။
စူစူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ နောက်ထပ် လာမယ့် သူမရဲ့ Vlog လေးတွေကို ဆက်လက်စောင့်မျှော်နေတယ်ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်လေးတွေ ဝေဆာနေအောင် ပေးထားကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ် ။ စူစူရဲ့ Cele Gabar ပရိသတ်ကြီးအတွက် သူမရဲ့ ပထမဆုံး ???? လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Ei Chaw Po, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ
Previous post အပြင်လောကကြီးမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြည့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
Next post အသက်၃၅ အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ခံယူချက်ကိုပြောပြလာတဲ့ အေးမြတ်သူ